Raw Methandriol poda (521-10-8) Vagadziri & Vanotengesa - Fakisi
Methandriol, inonziwo methylandrostenediol, inogadzirwa uyerogen uye anabolic steroid (AAS). IA17A-alkylated AAS uye 17α-methylated yakagadzirwa ye endogenous androgen prohormone androstenediol.
Raw Methandriol powder (521-10-8) Tsanangudzo
Raw Methandriol powder is steroid iyo yakafanana zvikuru ne prohormone 5-androdiol kunze kwekuti iC-17 alpha alkylated uye inoshandiswa pamativi ose maviri.Raw Methandriol powder inogadziriswa ne methyltestosterone, estrogenic metabolites uye 5-alpha inoderedza uyerogens inobatsira kusvika kune-side-effect profile yeyi steroid. "Kuwedzera kwekushanda" iyo steroid iyi inoita kana yakashandiswa pamwe chete nedzimwe uyerogens sezvinorongwa neDuchaine uye vamwe inogona kunge yakabatana nekudzivirira kwe11-beta hydroxylase iyo ichaita kuti mvura iwedzere kuwedzera uye inogadzirisa zvinokonzerwa nekuderedza serum cortisol. Sezvakataurwa pane imwe nzvimbo, kuvhara kwe 11-beta hydroxylase kunogona kukonzera kuwedzera kwehutano uye zvimwe zvinokonzerwa nehutano hwemwoyo.
Kemikari Name Mestenediol Diolandrone Metandriol Methandrolan; Protandren
muchiso Name Crestabolic, Cytobolin, Diandren, Madiol, Stenediol, Mestenediol
Molecular Wsere 304.47
Kunyorera Point 205 ° C
Biological Half-Life Panenge maawa 6
Skukodzera Kugadzikana muwaini
Chii chakakosha Methandriol powder (521-10-8)?
Methylandrostenediol (methandriol kwenguva pfupi) is an anabolic steroid yakabva ku dihydrotestosterone. Iyo mishonga pachayo inogadzirwa nenzira mbiri dzakasiyana chaizvo. Yokutanga isati yakatorwa (yakarurama) methylandrostenediol, iyo inoshandiswa pakuita mishonga inonzwika neyi steroid (kunyange zvazvo injectable imwe yaivepo muU.S.). Inowanikwawo semeteredland methylandrostenediol dipropionate, iyo yakagadzirirwa senjodzi. Iyo yakawedzera propionate esters mujecha inopindwa nejecha inowedzera basa remushonga kwemazuva mashoma. Kunyanya, methandriol zvinodhaka zvinoshandiswa c17-alkylated mafomu e5-androstenediol. Methandriol inorondedzerwa seanabolic isina simba ine simba uyerogenic properties. Inoratidzikawo kuti inoratidza huwandu hwemabasa eestrogenic, zvichiita steroid iyi isiri iyo yakanaka yekudya. Chirwere ichi chinowanzoonekwa sechinyoro, uye hachizivikanwi zvakanyanya pakati pevarimi vemapurisa nevatambi. Dzimwe nguva, kunyange zvakadaro, inoshandiswa panzvimbo yevamwe vanabolic / androgenic agents mukutinhira kwemahombekombe kana iripo.
Iyo yakakura Methandriol powder (521-10-8) mabasa
Kutanga kunyoresa mazano eStanediol inorayira kuyerwa kwe25 mg yakapiwa 2 kusvika ku5 nguva pavhiki nemugwagwa, murongwa, kana kuti nzira dzomukati. Nokuda kwechimiro- kana kuti kuita zvinokurudzira-chinangwa, chirwere chinowanikwa mumutambo we 25-50 mg zuva nezuva nokuda kwemufananidzo womuromo, uye 200-400 mg pavhiki neine injectable. Kuti uchengetedze kuwedzera kweropa kunyange neine injectable, inowanzoitwa kamwe kamwe kwemazuva matatu kusvika mana. Zvinyorwa zvinowanzoguma zvisingarengeki kupfuura 6 kusvika kumavhiki e8, mukuedza kuderedza hepatotoxicity uye kuoma pachiropa uye cholesterol maitiro. Iyi nhanho yekushandiswa yakakwanira kuwana zvishoma nezvishoma mumasikisi esimba uye simba, iyo inogona kuendeswa nehutsika hwekuchengetedza mvura.
Kunyange zvazvo zvingave zvichibvira kushandisa methylandrostenediol chete nokuda kwezvinangwa zvekuita musimba, inowanzobatanidzwa pamwe nemamwe anabolics nokuda kwesimba rakasimba. Inosanganiswa neDeca-Durabolin® kana kuti Equipoise®, semuenzaniso, kubudirira kunowanikwa kwemaoko masimba, pasina huwandu hwakanyanya hwekuchengetedza mvura, hunogona kuonekwa. Izvi ndizvo zvakagadzirwa nevakawanda veAustralia vet blends dzinosanganisira methylandrostenediol. Apo kutsvaka pfuma yakawanda yakawanda muhukuru, anonzi androgen ane simba zvakadai sa testosterone angangowedzerwa. Kukura kwakakonzerwa kunogona kunge kunoshamisa, asi mushandisiwo anofanira kutarisana nechigarire chakasimba cheesrogenic madhara. Mushonga wacho dzimwe nguva unobatanidza zvakanaka ne-non-aromatizing anabolics dzakadai saWinstrol®, Primobolan®, kana oxandrolone. Mugumisiro pano unofanirwa kuve wakanyanya kufarirwa pamusana pekuoma kwemasisipo, neine muwandu wepamusoro wehutano hwakasimba hwechiuno
Kutanga kunyoresa mazano eStanediol inorayira kuyerwa kwe25 mg yakapiwa 2 kusvika ku5 nguva pavhiki nemugwagwa, murongwa, kana kuti nzira dzomukati. Methylandrostenediol haigoni kukurudzirwa kuvakadzi nokuda kwehupenyu-kana kuti kubudirira-zvinokonzerwa nekukwanisa kwehutano uye hutano hwekubudisa maitiro akaipa.
Methandriol ine vanabolic pamwe chete uye androgenic michero iyo inobatsira pakuvaka musimba uye simba. Inogonawo kuparara mumafuta. Uyezve, haina kuchengetedza mvura yakawanda uye inoramba ichibudirira kwenguva yakareba kupfuura methandriol. Inoshandiswa pamwe chete nedzimwe steroid iyo inokudza migumisiro ye steroid molecules kuburikidza nekuwedzera kukurudzirwa kwemasiseri cell receptors. Inoshandiswawo mumishonga yezvokurapa. Vatambi vachishandisa iyi zvakare vakawana mishonga, simba uye uye kuderedza mvura yekuchengetedza.
Tenga Methandriol powder kubva kuBuasas.com